Yini ukuphahla? – Buza Noma Yini
Solved7.14K views July 6, 2021 General
Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe kuyini ukuphahla?
Mamlambo (anonymous)	 Posted June 10, 2021	 0 Comments
Yini ukuphahla futhi kubaluleke ngani?
Ukuphahla indlela esetshenziswa yinoma ubani osuke ephahla ecela noma ebika okuthile edlozini lakhe; Kungaba umcimbi thizeni ozowenza, ubabikela ngenkinga obhekene nayo, noma ubabikela ngenhlahla/msebenzi ongenzeka uwuthole, or ukhuluma nabo ngokomsebenzi wabo abakuphe wona. Ziningi ke izindlela zokuphahla.
Ukuphahla kubalulekile kakhulu ngokuba noma yini or isiphi isigxathu ozosithatha noma kuthiwa sincane kangakanani, kubalulekile ukuba uphahle ubazise abantu abadala ngezimo zempilo yakho, lokhu ukwenzelani nah; ukwenzela ukuthi kungashiwo ngelinye ilanga ukuthi awubanakile futhi uyazenzela umathanda ngekhanda lakho ngokuba umuzi nomuzi noma ungakholwa idilize iyntaba kodwa umuzi nomuzi unabanyikazi bawo abawusingethe okungamadlozi ekhaya. Kungakho fanele uma wenza Noma Yini ubabikele. Kusiza lokhu ukuba wamuleke umsebenzi wakho osuke uzowenza, engabe owakho noma oqondene nabo. Futhi kusiza ekubeni kugwemeke udweshu phakathi kwabo madlozi Kanye nasekhaya mhla sekwenziwa lomsebenzi futhi kusiza ekubapheni uqhozu lokinilwela nasezitheni.
Ubani okufanele aphahle?
Uma ungumuntu wezikhwama ekhaya wena indawo yakho onelungelo kuyo ukuba uyophahla kuyo, ilapho khona othetha khona amadlozi akho ezikhwama okungeseNdumbeni hai la okuthethwa khona amadlozi ekhaya, ngokuba amadlozi ezikhwama nawekhaya awahlali ndawonye kodwa ayalekelelana. Wena owezikhwama phahla kweyakho indawo uphahle awezikhwama Uma kakhulu Kazi ungumntwana ekhaya, unless kunguBaba noma uMama oseseleyo Uma engekho futhi umfana egcekeni engakwazi ukuphahla ndawo zombili ngoba uyena omdala. Uma nenza umsebenzi wekhaya Niya endlini yangenhla okuyindlu lapho okuhlala khona amadlozi ekhaya, lapho lowo onegunya lokuthatha idlozi afike alithethe abike lowomsebenzi etc afuna ukukwenza.
Izindlela zokuphahla, Uma ubika noma uphahla usebenzisani futhi uthini Nah.
Ukuphahla kwehlukene, Kukhona abaphahla egcekeni phandle, khona abaphahla esangweni, khona abaphahla emalibeni, khona abaphahla endlini enkulu (kamelweni Uma indlu yangenhla ingekho) or endlini yangenhla, khona abaphahla ngaphansi kwesihlahla kakhulukazi isihlahla sephahla, khona abaphahla esigangeni etc.
Uma uphahla kuya ngokuthi ekhaya Kini omkhulu babethi Uma bephahla basebenzise ini, nawe ke usuyokwenza njengabo it either usebenzisa; impepho nekhandlela nogwayi wesintu, impepho yodwa nogwayi, ugwayi wodwa noma ikhandlela elimhlophe lodwa, noma ikhandlela nogwayi or ikhandlela, ugwayi , impepho Kanye nogologo/beer/wine/isizulu/drink. Leyondlela okwakuphahlwa ngayo nawe isebenzise. Uma uphahla kubalulekile ukuba uzithobe futhi uhlonipheke, owesilisa akanankinga noma engangafaka lutho kodwa owesifazane ugqoka ingubo ende, noma isiketi eside, ashuqule ekhanda bese embesa amahlombe akhe.
Ukhuluma uthini ke.
“Nina boSibanibani abakosibanibani, ngiyazithoba kini mina sibanibani wakwaSibanibani, ozalwa nguSibanibani emzala kusibanibani. Nina bosibanibani, bakosibanibani, ngizonibikela ukuthi u 1 no 2 ozokwenziwa noma ozokwenzeka ngosuku olungukuthi, ngicela Nina bosibanibani bakosibanibani nihlanganyela kulo 1 no 2, niwenze ube yimpumelelo ube nokukhanya, ungabi nezihibe, niwengame, futhi niwusekele, abahambili abasuka kude nabo nibavikele kungabi khona ubutha. Noma izitha ezizowiphazamisa lomsebenzi esizo noma engizo wenza nhlaka…., Ngethembe lomsebenzi uzokwamukeleka kunina bosibanibani bakosibanibani kungakho ngizowubika kuqala, ngoba angifuni nibone ngabantu sebegcwele igceke bese niyexwaya. Nina ke bosibanibani bakosibanibani senobiza bonke osibanibani bakosibanibani enanidlelana nabo beze bezosingatha Nani baziwa yini. Ngibonge kunina bosibanibani bakosibanibani.” Noma Kungaba kanjena kodwa wazi ukuba Uma uphahla nakho okumele ukuqaphele:
1. Ukubingelela ngenhlonipho
2. Ukuba wazi uzophahlela obani
3. Ukubathakazela njalo mukhuluma
4. Uwazi nokuba ubani obhekise kuyena emva abanini bekhaya usubatshelile.
5. Uma usumbizile ozomonzela, ungabe usuthi “wena Sdwaba nawe skhindi nawe sqhoko sondelsni” ngokuba uzothi wenzela u Sdwaba kodwa wena wabe usibiza usqhoko Kanti usqhoko abazwani noSdwaba or bayamaZi uSqhoko ukuthi ungungoma wayona Uma kwafika yena yonke into iyabhidlika, ilapho khona usdwaba ehlehla ngoba ucikekile. Wena biza uSdwaba yedwa bese uthi “Usuyobiza labo owawudlelana nabo ke”.
Kungakho imisebenzi eminingi kuthiwa ayenzekanga ingoba nabiza nangoba bayona kwase kuthi okuyena mnini waduba.
BM (anonymous)	 Posted June 10, 2021	 0 Comments
Sizokuchazela ukuthi yini noma kuyini ukuphahla, kwenziwelani? kusiza ngani ukuphahla, uphahlelani? Ukuphahla ukuzikhulumela nabakini abangasekho usho ofisa ukukusho kulamakhandlela. Izindawo ophahlela kuzona
ukuphahlela endle noma entabeni noma ehlane noma esigangeni noma eqeleni – lokhu kujwayelekile lapho idlozi lakho lingekho kilini, ukhuluma nalo entabeni indlozi elingahlanziwe
ukuphahlela ekhaya emsamo, yilokhu okujwayelekile, ukwenza lokho uma idlozi lakho lihlanzekile
ukuphahlela emfuleni, lokho kwenziwa uma unendlozi lamanzi
Amakhandlela asetshenziswa lapha ayahluka ngenhloso yakho yokuphahla. Uma ungumuntu ojwayelekile usebenzisa amakhandlela amhlophe kanye na yellow. Uma ungumuntu onesiphiwo sendlozi, usebenzisa amakhandlela amhlophe, yellow kanye no blue. Uyaphahla ngamanzi akilini angenalutho, ngiqonde ukuthi angafakiwe lutho amanzi nje owakhe emfuleni. uyakwazi ukuphahla with impepho or without impepho. uma uphahla uyathwala enhlonko,ugcoka iroko,uphinde ugcoke nento yokuhloniphisa emahlombe. awuphahli ukuma periods kumele uphume esikhathini ke mase wenza into yakho nami ngizwa besho kanjalo abantu.
BM Answered question June 10, 2021